ဦးဆောင်ပြင်ပတွင်အလင်းအိမ် > LED downlight > Product-List
12W သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 24W သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 48W သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 16W မြို့ပတ်မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင်
24W မြို့ပတ်မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 48W မြို့ပတ်မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 12W Square ကိုမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 24W Square ကိုမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင်
36W Square ကိုမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 48W Square ကိုမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 48W Rectangular မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 72W Rectangular မျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင်
15W ဆဋ္ဌဂံမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 18W ဆဋ္ဌဂံမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 36W ဆဋ္ဌဂံမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင် 42W ဆဋ္ဌဂံမျက်နှာကျက်အလင်းကိုဦးဆောင်
2. မြို့ပတ်ရထား LED မျက်နှာကျက်အလင်း
3. ရင်ပြင်နဲ့စတုဂံမျက်နှာကျက်အလင်း LED
4. ဆဋ္ဌဂံမျက်နှာကျက်အလင်း LED
သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဦးဆောင်မျက်နှာကျက်အလင်း. ( သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဦးဆောင်မျက်နှာကျက်အလင်း )
တရုတ်နိုင်ငံ LED downlight တင်ပို့သူ
အဘို့အရင်းမြစ် LED downlight Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်မှာထုတ်လုပ်သူ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ LED downlight Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ထံမှ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ LED downlight ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်မှာ။
အဆိုပါ featured တရုတ်ဂွမ်ဒေါင်း LED downlight ဤနေရာတွင်စာရင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် karnar အလင်းရောင်အားဖြင့်ရင်းမြစ်ထားတဲ့နေကြသည်။
ဤအုပ်စုတို့ပါဝင်သည်: LED downlight
အဘို့အရင်းမြစ် LED downlight
အဘို့အကုန်ပစ္စည်းများ LED downlight
တရုတ်နိုင်ငံ LED downlight လက္ကား
ZhongShan LED downlight တင်ပို့သူ
ZhongShan LED downlight လက္ကား
ZhongShan LED downlight ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
ဂွမ်ဒေါင်း LED downlight ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
Guzheng မြို့ LED downlight ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED